Kugovera kupihwa kweChishanu Chishanu: yako online chitoro Chikamu II | Linux Vakapindwa muropa
El chishanu chitema kana chando chitema Iyo ipfungwa yakatangira muUnited States, asi yaita kusvetuka kune dzimwe nyika zhinji. Iri izuva iro kutengwa kweKisimusi kunovhurwa uye kuti zvitoro zvinotora mukana wekuita zvakakosha zvinopihwa zvine mitengo yakawanda kuti vakwezve vatengi vakawanda. MuUS, inopembererwa neChishanu mushure meKutenda, iyo inowira musi weChishanu wechina waNovember. Pamusoro peiyi chaiyo yakakosha yekutenga Chishanu, yakawedzeredzwawo mune dzimwe nzvimbo kusvika Muvhuro (Cyber ​​Muvhuro), yakatsaurirwa chete pakutenga kweInternet.
En chikamu chekutanga chechinyorwa Isu tato taura nezve zvese zvaunoda uye zvimwe zvakakosha zvekumisikidza yako online chitoro. Isu tinokurudzirawo imwe sevhisi yekubatira kubva kuSiteGound kambani. Izvi zvave kutobatanidza iyo WordPress plugin WooCommerce uye rutsigiro rweiyo system, iyo iwe yausina kutanga bhizinesi rako repamhepo kubva pakutanga, asi ingo tarisa pane zvigadzirwa zvako uye wotanga kuzvitengesa kana uchinge wasangana nezvose zviri pamutemo zvinodiwa zvatakataura nezvazvo muchikamu chekutanga cheiyo posvo.
Zvakanaka, sekuwanda kwezvitoro zvepanyama uyezve ese mabhizinesi epamhepo ari kuita, a chikuru kupa kune masevhisi e SiteGround kubata Chishanu Chishanu ichi. Ndokusaka ini ndichikurudzira iwe kuti utore mukana nazvo kana iwe uchida webhu saiti kune yako webhusaiti kana yepamhepo bhizinesi. Pasina kupokana, Nhema Chishanu inogona kukuunzira rombo rakanaka rekumisikidza rako repamhepo bhizimusi nechipo ichi uye ndiani anoziva… pamwe gore rinouya ndiwe unenge uchisimudzira masevhisi ako kana zvigadzirwa zveBlack Chishanu 2017.
Vanhu vazhinji, pavanosarudza yekutambira vanongotarisa kuve yakachipa kana dzimwe nguva sarudza yemahara sevhisi. Iyo yemahara webhu saiti ivo vakanaka mune dzimwe nguva apo pasina rutsigiro runodiwa kana kune chaiwo uye epamberi mapurojekiti, senge demo, PoC (Proof yeConcept), kana bvunzo. Asi zviwanikwa uye maficha anopihwa nenzvimbo dzekugara idzi anosiya zvakawanda kuti zvidikanwe kana chaunoda chiri chakasimba uye chinobudirira chikuva chekumisa webhusaiti yako kana e-commerce.
1 Ungasarudza sei yakanaka yekutambira sevhisi?
1.1 Nzvimbo yekugara
1.3 Kutamisa kwemwedzi
1.4 Kuwanika kwepamusoro (uptime)
1.5 Rutsigiro rwehunyanzvi
1.6 RAM ndangariro
1.7 Simba rekugadzirisa
1.8 Rakaomarara dhiraivha mhando
1.10 Nhamba yenzvimbo dzakatsigirwa uye mamwe masevhisi
1.11 Panodhi yekudzora
2 Zvimwe Zvimiro
Ungasarudza sei yakanaka yekutambira sevhisi?
Kurasa mahara ekugamuchira masevhisi isu tinofanirwa kutarisa kune akabhadharwa kana tichida chimwe chinhu chakakomba. Kune akawanda eaya masevhisi, neimwe kana imwe yacho features. Dzimwe dzadzo dzinotarisa zvakanyanya pane mamwe niches, kusimudzira zvimwe zvinonyanya kudikanwa maitiro eiyo niche kana kupa imwezve sevhisi, mamwe ari akajairika asi anochinja-chinja kuitira kuti iwe ugone kuwaumba iwe nezvaunoda. Nekuda kwekusiyana uku, ndichaedza kupa mamwe mazano kuitira kuti iwe ugone kuita sarudzo yakanaka.
Iyo ndeimwe yemaparameter akakosha, sezvo iri yakaoma dhisiki nzvimbo iyo iwe yauchazove nayo padandemutande rekuchengetedza zvirimo papuratifomu yako, zvese zvewebhu, mifananidzo, mavhidhiyo, kurodha pasi, nezvimwe. Ndosaka uchifanira kusarudza pekugara iyo inokupa iwe yakakwana GB kuitira kuti yako rese network ikwane zvakanaka. Mamwe masevhisi anosanganisira risingagumi kugona mune avo ekutanga masevhisi, saka ichi chivimbiso cheramangwana.
Semuenzaniso, mune iro rechitoro chepamhepo, neWordPress, plugins, mifananidzo, makatalog uye zvese izvo webhu zvingave nazvo, zvinogona kukwana neinenge 500MB, zvinogara zvakanaka kuve nezvakawanda zvekuwedzera mune ramangwana.
Izvo zvakakoshawo, gara uchifunga kuti zvinoenderana nekumhanya kunoitwa nevatengi vako kana vashandisi pawebhu, kumhanyisa kwekuburitsa kwavanoita, nezvimwe. Ramba uchifunga kuti kushandira iyo isinganzwisisike yakakwira bandwidth haina musoro zvakanyanya kana vashandisi vako 'yekumhanyisa kumhanya yakaderera ...
Rate pane iyo huwandu hwekuchinjiswa hunotsigirwa newebsite yako zvinoenderana. Ndokunge, zvinokanganisa huwandu hwevashandisi kana kubatana uko webhusaiti yako ichave nako. Naizvozvo, kana iwe uchizowana webhusaiti sezvakawanda zvikumbiro, iwe uchave unofarira kuve neakanaka bandwidth, zvikasadaro kuchave nematambudziko kana uchiedza kuwana iyo webhusaiti. Kuti mubhizinesi inoshandura kuita kurasikirwa, yega yega yakakundikana kuwana zvinoreva akarasika kana kusagutsikana mutengi ...
Kana semuenzaniso tine webhusaiti ine mutoro we100KB uye isu tinopa 1MB kurodha pasi, uye huwandu hwevashandisi pamwedzi i1000, tinofanirwa kufunga chiyero che (0,1MB + 1MB) · 1000 = 1100 MB, semuenzaniso.
Kuwanika kwepamusoro (uptime)
Izvo zvakakosha kuti ive nekuwanika kwepamusoro, ndiko kuti, kuti server haina kuparara nguva dzose uye yakasimba. Nechikonzero chakafanana sepachikamu chakapfuura, webhusaiti yakadonha haina zvibereko uye vatengi kana vashandisi vanopedzisira vashatirwa. Inofanirwa kuve yakanaka, kureva kuti, 100%, asi izvo hazvipo mukuita, saka ivo vanofanirwa kutivimbisa kanenge 98% kana kupfuura.
Rutsigiro rwehunyanzvi rwakakosha kwazvo, makambani mazhinji anopa runhare, tsamba kana rutsigiro rwekukurukurirana kuitira kugadzirisa kusahadzika kwako uye kukubatsira kugadzirisa matambudziko ane yako online chikuva. Muzviitiko zvakawanda, rutsigiro rwunopihwa maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki uye mazuva makumi matatu nemazana matatu pagore. Rutsigiro urwu ndirwo urwo urikuedza kutsvaga, nekuti hauzive kuti matambudziko anogona kuitika uye iwe unoda kuve nechengetedzo yekutsigirwa chero nguva.
Ini zvakare ndinokukurudzira iwe kuti utsvake makomenti nemaonero kubva kuvashandisi, kana rutsigiro irworwo rusina kukurumidza kana rwuri mune mumwe mutauro watisingagone, harubatsiri ...
Iyo inokanganisa nekumhanyisa iyo iyo yewebhu inotakura, nekudaro iyo yakawedzera RAM, iyo inowedzeresa webhusaiti yacho ichave. Vazhinji vashanyi panguva imwe chete, inowedzera RAM inodikanwa, saka 256MB ye RAM inofanira kukwana kune mamwe mawebhusaiti.
Kuva nevhavha ine mapurosesa ane simba inogara iri zano rakanaka, kunyangwe kana iwe usingavimbi yakawanda yedhata inopihwa, nekuti dzimwe nguva vanogona kuve vashanduri vane simba kwazvo, asi vakapararira pamusoro pemawebhusaiti mazhinji. Saka zviri nani kutarisa kuti mangani emasimba iwayo akatsaurirwa chete kune webhusaiti yedu.
Rakaomarara dhiraivha mhando
Iyo yekuchengetedza yatakataura nezvayo pakutanga haisi yekugona chete, asi zvakare kumhanya kwekuverenga nekunyora kunogona kuita mutsauko. Kunyangwe isina kukosha zvakanyanya, mamwe masevhisi anopa solid state hard drives SSD pane iyo yechinyakare magineti kana HDD. SSDs vanopa yakakwira kumhanya.
Izvo zvakakosha, chikamu chayo chinoenderana neiyo yekukwirisa chiyero icho sevha inayo. Linux server (kana imwe Unix) haina kufanana neWindows server. Nguva dzose iyo Unix-senge inoshanda sisitimu inokupa iwe yakawanda chengetedzo, kushomeka kutsamira pama reboots uye kugadzirisa, kuwedzera kugadzikana uye kusimba, nezvimwe. Muchidimbu, kuwedzera kugadzirwa uye kunyangwe sisitimu iri yemahara, seGNU / Linux kana FreeBSD, kuchengetwa mumarezinesi kunogona kuturikira mumitengo yakagadziriswa zvichireva kune avo vanobhadhara yakanyoreswa Windows kana rezinesi reUNIX.
Nhamba yenzvimbo dzakatsigirwa uye mamwe masevhisi
Kana iwe uchingo kunyoresa domaini imwe chete, ichi hachisi chinhu chakakosha kwauri, asi zviri kana iwe uchida kunyoresa mamwe madomeni. Sezvazvakaita nekuchinjisa uye kugona, mamwe mauto anopa kubva ku1 dome kana maviri, kusvika kune risingagumi.
Mamwe masevhisi anogona kukufarira iwe kana ivo vachipa dhatabhesi uye kugona kwavo, email uye kugona, FTP, nezvimwe.
Ndiyo pani iyo inopihwa yekutonga nekutungamira kwenzvimbo. Inonyanya kufarirwa ndeyeCpanel uye Plesk, saka kana uine imwe yeizvi, zvakanaka.
Ndiyo network yese yemamwe masevhisi kana ewebhu mapuratifomu avanopa. Semuenzaniso SiteGound yatiri kutaura nezvayo, iyo inotopa WordPress uye WooCommerce yatove-isati yaiswa. Izvi zvinogona dzimwe nguva kunetsa kana chinangwa chako chiri chimwe, asi kana izvo zvauri kutsvaga iri iro bhizinesi rechitoro, rinokupa hwaro hwakanaka kwete kutanga kubva pakutanga.
Saka zvinoenderana nezvaunoda (WordPress, PrestaShop, Magento, Joomla, Drupal,…).
Mutengo wakakosha, asi ini ndingati iwo wakanyanya kukosha, kunze kwekunge mutengo wakanyanya zvakanyanya uye usinga kwanise. Asi kazhinji hazvidhuri zvakanyanya uye zviyero pagore kana pamwedzi zvakaderera. Izvi zvinoenderana nehomwe yako, iyo mari iwe yaunoda kuisa uye iyo purofiti margin ...
Nekudaro, makambani mazhinji anowanzo kupa mazera akati wandei, kana aine sarudzo yekuenda kubva kune imwe kuenda kune imwe, ini ndinokurudzira kuti utange neyakaderera uye kana zvikafamba mushe, edza nekufamba kwenguva kuti uende kune yakakwira.
Paunenge iwe wasarudza yakanaka webhu inomiririra, iwe unogona zvakare kutarisa pane zvimwe zvekuwedzera maficha iyo saiti yako inofanira kuve nayo, chimwe chezvakakosha kuchengetedzeka. Mutengi haavimbe nedhata rake uye achabhadhara papuratifomu isina kuchengetedzeka. Izvi zvekuwedzera dzimwe nguva isu tinofanirwa kuzviita pachedu uye pane dzimwe nguva ivo vatove vakaverengerwa mune sevhisi inopihwa nemakambani ekutambira. Kana ivo vachikupa kwauri, izvo hazvireve kungorerutsa chete, asi zvakare ichaverengerwa mune yehunyanzvi rutsigiro rwavanopa.
Ngatione mimwe mienzaniso yemasevhisi izvo zvinogona kukufarira kuchitoro chako chepamhepo kana bhizinesi:
firewall- Iyo purazi revhavha inofanirwa kuve nechengetedzo network kudzivisa kuramba kwekurwiswa kwebasa nemamwe matambudziko ekuchengetedza Vamwe vanopa zvese WAF uye zvepanyama, uye kunyangwe anti-kutyisidzira.
Kudzivirira kwe malware: ingave Unix kana Windows, iwe unofanirwa kunge uine mamwe matanho ekuchengetedza kudzivirira malware uye bots futi.
Zvekuchengetedza zvinogadziridza: software yese inogadzira chikuva inofanirwa kugara ichivandudzwa kana kuiswa zvigamba kuti zvivhare zvinokanganisa zvinogona kushandiswa zvisiri pamutemo.
SSH- Izvo zvakakosha kuti uite Yakachengeteka Shell yekubatana kwakachengeteka. Iyi yakavharidzirwa yekutaurirana protocol inodzivirira ruzivo rwunotamisirwa kubva kumakomputa kuenda kune webhusaiti kana zvinopesana kuti zviitwe zviri pachena zvinyorwa. Panzvimbo iyoyo, yakavharidzirwa uye inodzivirira yakavanzika dhata kubva pakuwanikwa nekumwe kurwiswa.
SSL Zvitifiketi: kuva nechiratidziro cheSSSL chakakosha kuitira kuchengetedzwa kwenzvimbo yedu, saka yedu HTTP kana FTP ichave HTTPS kana FTPS.
Vamwe: kana vakapa mamwe matanho ekuwedzera akadai antispam yemasevhisi masevhisi, vamwe vanopa backups zvezuva nezuva, yekuzivisa yekupinza, uye zvimwe.
Iko kumhanya kunoenderana muchidimbu pane server server (RAM, mapurosesa, SSD disks,…), pane hunhu hwenetiweki uye software (Linux, Apache, WordPress,…) sezvatambotaura. Asi zvisinei neizvi, kumwe kumisikidza kunopa mamwe matekinoroji avanoshandisa kuti vawedzere kumhanya uku, kunoongwa pamwe chete kubva kune mushandisi / mutengi divi, pamwe nekubva kumutariri / muridzi wewebhu.
Versions: Kuva nezvakawanda zve-zve-zvenguva shanduro zve software kana mitauro yakashandiswa zvakare vimbiso yekumhanyisa.
CDN (Yemukati Dhirivhari Network): network yemaseva ari munzvimbo dzakasiyana dzepasi kumhanyisa kurodha kwewebhu munyika dzakasiyana kana vatengi vako vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi. Zvakanaka, izvi zvingave zvinonakidza mune zvekuti bhizinesi rako nderepasi rose.
pabutiro: web cache system, izvo chaizvo zvazvinoita kutakura iyo webhu pane yakatsaurwa sevha kuti ishande se cache uye painonzi webhu inokumbirwa ichave yatotakurwa kare pane yakati server kuti iratidze nekukurumidza.
Uye kupedzisa, zviyeuchidze iwe kuti ese aya mapoinzi atiri kutaura nezvake nezvekutambira inopihwa nevakomana vanobva kuSiteground. Uye kana ukatora mukana wekugadzirisa panguva yeChishanu Chishanu unogona kuchengetedza imwe mari inonakidza.
Usakanganwa kusiya yako inotsanangura nemipiro ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubata zvakare kune yayo Nhema Chishanu
Ivo vanowana kutambura muGStreamer